Ra'iisul wasaaraha Kenya oo amray in la baaro Xasuuqii Wagala - BBC Somali
Ra'iisul wasaaraha Kenya oo amray in la baaro Xasuuqii Wagala
15 Febraayo 2011
Ra'iisul wasaaraha dalka Kenya, Raila Odinga, ayaa amar ku bixiyay in xeer ilaaliyaha guud ee dalka uu furay baaritaan rasmi ah oo ku aadan dilka tiro badan oo Soomaali ah ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, kaasoo dhacay 27 sano ka hor.
Isagoo ka hadlayay sanadguurada 27-aad ee xuska oo loo yaqaan xasuuqa Wagalla, ayaa Mr Odinga wuxuu sheegay in uu ahaa mid ka mid ah bogagii ugu xumaa ee taariikhda dalka Kenya.
Dadka deegaanka iyo dad ka badbaaday dhacdada ayaa sheegay in ilaa shan kun oo qof lagu dilay.
Hase yeeshee, dowladda Kenya ayaa tirada ka dhigaysaa mid aad uga yar intaas.
Weriyaha BBC Baskas Jug soo dhacay ayaa tagay goobta dilku ka dhacay ee garoonka Wagala.
Sida uu ku soo waramayo weriyaha BBC Bashkas Jug-soo-dhacayDadka qaar intii badbaaday ayaa kadib baabuur lagu daadgureeyay oo lagu daadi'yay goobo fog oo go'doon ah, haalkaas oo intooda badan baahi iyo dhaawacyo ay qabeen ugu dhinteen, iyadoo qaar uu la sheegay in waraabe uu cunay.
Dhacdadaas, oo in badan ay ku tilmaameen xasuuq ayaa qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday ay BBC uga warameen dhibaatada soo gaartay iyaga iyo ehelkoodaba.
Warbixintan waxaa ku jira sharaxaad naxdin leh oo ay dhici karto in dadka qaar aysan xamili karin.
Dadwaynaha Wajeer ayaa sheegaya in ilaa shan kun oo qof ay ku dhinteen Wagala iyo deegaano kale markii dadka laga daadgureeyay goobta sabab la xiriirta in dunida laga ogaaday waxa dhacay, oo qaylo dhaan xoog leh looga soo horjeestay wixii dhacay.
Hase yeeshee, dowladda ayaa ku adkaysanaysa in wax ka yar 100 qof ay ku dhinteen dhacadada.
Muddo dheer ayaa dadka deegaanku waday dadaal la doonayo in ugu yaraan cadaaladda la horkeeno ciddii ka dambaysay dadka la laayay. Hase yeeshee, taasi ma dhicin. waxaa dad badan ay rajo ka qabaan in dastuurka cusub ee dhowaan la ansixiyay uu saamixi doono in baaritaan la sameeyo, iyadoo hadaba uu baaritaankaas ra'iisul wasaaruhu amray in lagu dhaqaaqo.